Alle: Dadka kalena wax ka baro – Kaasho Maanka
Dad badan baa aaminsan in Alle iyo insaanku aysan marnaba kala soocmi karin, ayaga oo ku doodaya in wax walba oo jira ay qeyb ka yihiin Alle. Anaga insaanka ah, ayay leeyihiin, waxa aan qeyb ka nahay Alle, sidoo kale kownka oo idil waa qeyb ka mid ah Alle. Waxa ay meesha ka saaran sida ay dad badani wax u arkaan ee ku dhisan is-huwanta ah ‘Abuure iyo La-abuure’. Diinta Hinduuga ayaa, sidoo kale, kownka oo idil oo aynu qeyb ka nahay ugu yeera Alle (Rigveda 10.9.2).
Qolyahani waxa ay ka simanyihiin in ay meesha ka saareen in xad u dhaxeeyo Alle iyo inta kasoo hartay. Waqti aanan sidaa usii fogayn baan soo qoray su’aal u dhignayd, ‘Allaah iyo abuurkiisa halkee ayaa xuduud u kala ah?’ Waxaa suuragal ahayd in dad badani aysan si qoto dheer u eegin su’aasha amaba ay la yaabeen, balse xaqiiqda ayaa ah in haddii la isku dayo in lakala sooco Alle iyo inta kale ay dhacayso in lasii kala sooco waxa Alle ah. Tusaale, Alle haddii uu gacan leeyahay iyo maskax (inkastoo gacanta iyo maskaxdu aysan ahayn teena oo kale), gacanta ma Alle bay noqonaysaa mise abuur ayay noqonaysaa oo maskaxda ayaa noqonaysa sadhigga ‘Allenimada’.
Arrinta kale ee ay qolyahani daaqadda ka saareen ayaa ah in uu Alle tiro yeesho, oo la yiraahdo hal Alle ama labo Alle. Alle marka loo yeelo tiro gooni waa uu ka cukanyahay marka uu tirobeel yahay. Maxaad ugu baahantahay in aad tiraahdo hal Alle ayaa jira, maxaadna ula jeedaa marka aad leedahay, ‘hal Alle ayaa jira’? Adeegsiga tirada waxaa dhaliya sabab, sababaha dhaliyana waxaa ka mid ah in waxa la tireeyay ay leeyihiin saldhig iyo bar bilaw ama in ay jiraan/jiri jireen waxa la tireeyay wax la mid ah.
Xigmad aan u malaynayo inay asal ahaan Jarmal tahay ayaa waxay tidhaa "Meesha aqoontu ku dhamaato ayuu iimaanku ama aaminaaddo ka bilaabantaa"
Cabsida bannaanka ee nimankii godka
Koox dad ah ayaa qol mugdi ah lagu xereeyay. Waxaa la siiyay shumac yar (oo aan dhamaanayn) si ay iftiin uga helaan; sidoo kale na waxaa ay haystaan sahay ku filan cimrigooda inta ka hadhsan. Qolku waxaa uu ku dhexyaallaa xayndaab weyn oo isaguna gudcur ah, oo ay dhaxan iyo dabaylo darani ka dhacayaan. Waxaa loo sheegay, haddii ay albaabka furaan ama ay damcaan in ay qolka dibada uga baxaan in...
W/Q: Gallad Gurxan 26th December 2019